अन्तरवार्ता | Samacharpati अन्तरवार्ता – Page2– Samacharpati
भारतले लिपु लेक र कालापानी आफ्नो नक्सा भित्र राखेपछि पछिल्लो समय नेपालमा भारतको तिब्र बिरोध भएको छ । भारतले पछिल्लो समय जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपु लेक भारतीय भूमीमा परेको देखाएको छ भने भारतले त्यसको खण्डन गरेको छ । भारतले कुनै पनि सिमा नमिचिएको बताए पनि नेपाल सरकारले भने भारतले जारी गरेको नक्सा […]
पढाउन स्कुल हिडेकी प्रधानध्यापकलाई आफ्नै भतिजले खुकुरीले हाने ! कारण यस्तो छ
पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुमस्थित राष्ट्रिय जनकल्याण आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्द्रकुमारी पुनलाई खुकुरी प्रहार गर्ने रुमका रमेश पुनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार घरबाट विद्यालय जाँदै गरेकी प्रधानाध्यापक पुनलाई खुकुरी प्रहार गरी फरार भएका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुम बिलबाङका २७ वर्षीय रमेश पुनलाइ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। खुकुरी प्रहार गरी फरार भएका पुनलाई इलाका […]
भिरको फोहोर फालिएको जग्गा यसरी भयो मालामाल ! दैनिक १ लाख सम्मको आम्दानी
मधुमेयका रोगीलाई खुसीको खबर, खाना जति खाएपनि आफै सुगर नियन्त्रण गर्ने प्रविधि आउदै, यसरी गर्छ काम
#sugar #madhumeya #diabetes #Sugar मधुमेयका रोगीलाई खुसीको खबर, खाना जति खाएपनि आफै सुगर नियन्त्रण गर्ने प्रविधि आउदै, हेर्नुहोस यसरी गर्छ काम Sugar मधुमेह अर्थात डाइबेटिसलाई सामान्यभाषामा चिनिको रोग भन्ने गरिन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढि भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । प्यांक्रियाज नामक ग्रन्थिबाट उत्पादन हुन् । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुदा मधुमेह हुन जान्छ […]
पर्वतमा संसारकै अग्लो बञ्जीजम्प यसरी बन्दैछ, कालिगण्डकी हेर्दा आङ नै सिरिङ्ग हुने
पर्वत,१३ कातिक । पर्वतमा निर्माण भईरहेको बन्जीजम्पको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीजम्प दावी गरिएको बन्जीजम्प माघ महिना सम्ममा संचालनमा ल्याउने तयारीमा निर्माण कम्पनी रहेको छ । कालीगण्डकीको खोंच पर्वतको कुश्मा र बागलुङको बलेवालाई ५ सय २० मिटर लामो झोलुंगोमा जोडेर त्यसैमा बन्जीजम्प निर्माण भईरहेको छ । बन्जीजमको उचाई २ […]
अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेंचाइजी शो नेपाल आइडल सीजन २ बाट चर्चित बिक्रम बराल प्लेब्याक गायक हुन् । उनि नेपालको सबैभन्दा सुन्दर शहर पोखराका हुन् । उनले आफ्नो स्वर सुन्ने युवा युवतीलाइ लठै पार्छन । उनको राम्रो पक्ष भनेको नै सबै गीतमा निर्धक्क भई गाउन सक्नु नै हो । नेपाल आइडल सीजन २ पछि विभिन्न कार्यक्रममा निकै ब्यस्त […]
टेलिकमको फोरजी दशैंभित्रै मुख्य शहरमा पुग्ने
कन्ट्याक्ट लेस कार्ड भित्र्याउदै एससीटी
धादिङ, २६ साउन । सर्लाहीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना ६ ख ७४६९ नम्बरको बस धादिङको सलाङघाटबाट त्रिशुली नदीमा खसेको बसमा सवार यात्रुहरु अझै पनि फेला परेका छैनन् । बस राति करिब पौने तीन बजे खोला खसेको स्थानीयले बताएका छन् । दुर्घटना पनि एकै परिवारका ६ जना वेपत्ता परेका छन् । बाबुआमा सहित उनीको ४ जना […]